28. नेपाली पत्रकारिता: जुझारु,निष्पक्ष र विश्वसनिय
You are at Home Podcast 28. नेपाली पत्रकारिता: जुझारु,निष्पक्ष र विश्वसनिय
नेपाली पत्रकारहरुमा स्वतन्त्र र जुझारु अभ्यासको प्रशस्त गुण छ। सरकारका कामको निगरानी गर्ने र खवरादी गर्ने दावित्ववोध पनि उनीहरुमा छ ।समग्रमा आलोचनात्मक प्रबृत्ति सशक्त छ। त्यसकारण शक्तिशाली बर्गका लागि यो चुनौति बनेको छ। अहिलेको सरकारका ठुलावडाहरुले पनि पत्रकारहरुलाई समस्याका रुपमा बुझेका छन।तसर्थ उनिहरुल् गर्ने व्यवहार सकारात्मक छैन् ।
पत्रकारितामा सत्यता र प्रभाव जाँच गरिएका सामाग्रीहरु मात्र समाचारको रुपमा प्रस्तुत हुने हुनाले पत्रकारिता सामान्यतय: यो जिम्नेवार र निष्पक्ष हुन्छ ।तथापी केही बिकृति र सनस्या नभएको होईन।जस्को समाधान स्वनियमनको संस्कार पढाउने र अनुसन्धनात्मक प्रबृतिलाई प्रोतिसाहित गरेर हुनसक्छ।
आजको पडकाष्टको छलफलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल र, फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालसँग सहजमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।